I-cottage ekhululekile ene-terrace kufuphi neMinsk
Марьяливо, Минская область, Минский район, Belarus
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguИрина
UИрина unezimvo eziyi-35 zezinye iindawo.
Ingaphakathi lendlu ukusuka kumyili odumileyo kwisitayela seProvence senziwa ngendlela yokuba yonke indawo iphefumle ukutsha. Igumbi lokuhlala elinelanga elibanzi kunye neefestile ezinkulu ze-2 kunye nokufikelela kwi-terrace, ifenitshala ephakanyisiweyo, amagumbi amakhulu kunye nemibono emangalisayo ukusuka kwifestile ukuya ehlathini, indalo, i-pool yonke into oyifunayo ukubuyisela amandla akho okomoya kunye namandla. Indawo ebanzi - ngokuhlwa unokuhlala ngaphandle, uqhotse i-shish kebabs kwi-grill yokucula iintaka zehlathi.
Kukho i-terrace, i-Wi-Fi yasimahla, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, kunye nendawo kunye nezixhobo zebarbecue. Ungasebenzisa izixhobo zasekhaya - i-microwave, iTV eneetshaneli zesathelayithi, umatshini wokuhlamba, ibhedi yenkosi. Ngomrhumo owongezelelweyo, ungasebenzisa i-sauna kunye nendawo yokuphumla.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-35 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
ukuya eMinsk-10 km. Imyuziyam ye-Belarusian Folk Art e-Raubichi i-3 km kude. I-Khatyn Memorial Complex eyaziwayo yimizuzu engama-35 yokuqhuba. Amaziko e-Ski-i-Silichi kunye ne-Logoisk-i-20 km ukusuka kwindlu, i-3 km - i-sport complex Raubichi enemizila ye-ski-roller, i-skiing rink yangaphakathi, izilayidi ze-sledging kunye ne-tubing, irenti ye-ATVs, kunye neekhefi, iivenkile zokutyela kunye neevenkile zokutya. Ehlotyeni, iinkundla zentenetya zivuliwe eRaubichi.
Siyakumema kwaye sikunqwenelela ukuhlala okumnandi!
Umbuki zindwendwe ngu- Ирина